မြန်မာနိုင်ငံပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ် လို့ ဦးသန့် ၏ မြေး သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦး သတိပေး – TodayZ
မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ အင်တန်မှ အန္တရာယ်များပြီး သေချာရေရာမှု မရှိလှတဲ့ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုယခုအချိန်ကတည်းက ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့
သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
မူဝါဒရေးရာမဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးအဖွဲ့ကနေဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ ယောမင်းကြီးဇရပ် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအတွက် သူရဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုချက်မှာအခုလို သတိပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတကို အလွန်အမင်းအားထားနေမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံက ကြီးထွားလာမှု ၊ပြည်တွင်းမှာ ပဋိပက္ခတွေရှိနေမှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ
ကွာဟမှု ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတွေအပေါ်ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ မြန်မာမှာအဆင်သင့်ရှိမနေမှု တို့အပေါ် သူက အခြေပြု ထောက်ပြခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာတွေအဖို့ အတိတ်က ယုံမှတ်မှားချက်တွေနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု ၊ အတိတ်က မိမိဘာသာ ဖူလုံမှု သုံးမကုန်တဲ့သယံဇာတတွေဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေအပေါ် စွဲလမ်းနေတာကိုကျော်လွန်သင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ် လို့ ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးက ပြောပါတယ်။
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲရင် လူတွေဘယ်မှာနေကြမလဲ ?၊ တရုတ်က အကုန်လွှမ်းမိုးသွားမလား?၊ထိုင်းနိုင်ငံလို မြို့ကြီးတွေဖြစ်လာမလား? ၊ မြို့ငယ်
ရွာငယ်လေးတွေ ဆက်ကျန်ဦးမှာလား ? လို့ အနာဂတ်ကာလအတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားကြသလဲ ?ဆိုတာကိုသူက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် … အရေအတွက်ထောင်ချီတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးစားတွေကတဆင့် သန်းနဲ့ချီတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံသားခရီးသွား ဧည့်သည်တွေကို ဧည့်ခံနေတဲ့ မန္တလေးဟာ … … လူနည်းစုကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်း အနည်းငယ်နဲ့ယူနန်ကိုပြည်ပ ပို့ကုန်တွေတင်ပို့ဖို့စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့မန္တလေးမြို့နှိုင်းယှဉ်ရင် လုံးဝ ကွဲပြားနေတာ တွေ့ရမှာပါလို့ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးက ပြောပါတယ်။
၂၀၁၁ က စခဲ့တဲ့ ကူးပြောင်းရေးကာလ နောက်ပိုင်း အထူးသဖြင့်၂၀၁၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းနှစ်တွေအတွင်း နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေ၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားကုန်ပြီးတရုတ်လိုနိုင်ငံကိုသာအားထားရမယ့်အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေမှု ကြောင့် တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာ စီမံချက်တွေအပေါ် မြန်မာအစိုးရရဲ့သုံးသပ်ပြင်ဆင်နိုင်မှုတွေကိုဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်လာတဲ့လေ့လာသူတွေကတော့ သံသယတွေနဲ့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လတ်တလောအတွင်းမှာပဲ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေထံကနေတရုတ်နိုင်ငံက … တရုတ်မြန်မာ စီးပွားရေး လမ်း မမှာ အဓိက လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ ကူမင်း – မန္တလေး ရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွက် သဘောတူညီမှုကို မကြာခင်ရယူနိင်တော့မယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာ မီဒီယာအချို့မှာ ပြောဆိုထားတာပါတယ်။
ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူထုရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်နဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ဆက်စပ်နေတဲ့ပါရဘွဲ့ကျောင်းသူ ဒက်ဘီချန်းကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂၀ လောက် ကုန်ကျမဲ့ စီမံကိန်းရဲ့ အပေါ်မေးခွန်းထုတ် ပြောဆိုပါတယ်။
အခုလို မန္တလေး ကူမင်းရထားလမ်းစတင်တော့မယ်ဆိုတာကူမင်းကျောက်ဖြူရထားလမ်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုကတာ့ ကုန်ကျငွေအနည်းဆုံး ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀ လောက်ရှိမဲ့ စီမံကိန်းအတွက် ဘယ်လို အတိုးနှုန်းတွေ ပေးဆပ်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲ။ အဲဒီကိစ္စတွေအတွက် သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုကလည်း မရှိသလောက် နည်းပါးလှသလို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက်လည်း မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဒက်ဘီချန်းက ထောက်ပြပါတယ်။
ကျောက်ဖြူ- ကူမင်းရထားလမ်းက ယခင်အစိုးရလက်ထက်က လူထုကန့်ကွက်မှုတွေ ရှိလို့ စီမံကိန်း ရပ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လူထုကန့်ကွက်လို့ ရပ်ထားတဲ့ စီမံကိန်းကို သဘောဆန္ဒမရယူဘဲ ပြန်လုပ်မယ် ပြောလာတာဟာ မဲပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထည့်သွင်း စဉ်းစားရဲ့လားဆိုတာမေးစရာဖြစ်လာတယ်လို့ ဒက်ဘီချန်းက ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးကတော့ မြန်မာအနေနဲ့ စီးပွားရေးအရတန်းတူညီမျှမှုကို ဦးစားပေးမလား ဒါမှမဟုတ် …..အခုပုံစံဆင်းရဲချမ်းသာ အကြီးအကျယ်ကွဟနေတဲ့အတိုင်း လက်ခံနေထိုင်ကြမှာလားဆိုတဲ့အချက်က မဖြစ်မနေစဉ်းစားရမယ့်အချက်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရှေးမြန်မာတွေမှာအိုင်ဒီယာရှိခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်က မြန်မာတွေရဲ့လယ်သမားတွေက စုပေါင်းပြီး ပထမဆုံးမြို့ပြနိုင်ငံတွေထူထောင်ခဲ့ကြသလို ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ဆက်သွယ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဘာသာ ၊ အစိုးရစနစ် ၊ အနပညာ ၊ သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အိုင်ဒီယာတွေကို တင်သွင်းလာနိုင်ခဲ့ပြီး
လူအဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့ကာ နောက်နှစ် ၁၀၀၀ လောက်အကြာမှာ ပုဂံလို အလယ်ခေတ်သမိုင်းမှာ အထင်ကြီးခန့်ညားဖွယ် မင်းနိုင်ငံ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ သူကနှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရှေးအတိတ် ကြေးခေတ် နှစ်ထောင်ချီ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ပုဂံခေတ်တုန်းကမြန်မာတွေလို တွေဝေဆိုင်းငံ့မနေဘဲပြင်ပ ဗဟုသုတွေကိုသုံးသပ်ပြီး ပိုပြီးကြီးကျယ်စွာ၊
ဖန်တီးမှုရှိစွာ တွေးခေါ်ကြဖို့လိုပြီး ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့နိုင်ငံက ပျောက်ကွယ်ကောင်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့ ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးက သတိပေးပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတအပေါ်မှာပဲ မှီခိုနေမှု ၊တရုတ်ရဲ့ ကြီးထွားလာမှုအပေါ် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသလဲစတဲ့ အချက်တွေကို သူ့ရဲ့ ထောက်ပြမှုက ဆွေးနွေးသူတွေအတွက်ပါမက အခြား ပွဲလာတက်သူတွေအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။